4 zvikonzero vanhu vanofarira magetsi mutyairi bhasikoro | ebike Shuangye
musha Blog nhau 4 zvikonzero vanhu vanofarira magetsi mutyairi bhasikoro
Zuva ： 2020-07-29 Zvikamu:nhau Views: 2,382 maonero
Saka zvino, electric commuter bike kunyanya zvine mukurumbira kuti uende kubasa kana kuchikoro uye kusimba. Iyi ndeimwe yemamiriro akakodzera ekufamba panguva yeCOVID-19. Saka vanhu vazhinji vanoisa magetsi emagetsi bhasikoro bhasikoro zvakanyanya kuwedzera kuve nekufamba kwavo kwemazuva ese. Heano zvikonzero zvishanu vanhu vanosarudza kusarudza yemagetsi mutyairi bhasiketi sechinhu chikuru kana chechipiri chekufambisa.
Magetsi bhasiketi yemagetsi inokusvitsa ikoko nekukurumidza, ichi chinogona kuve chakakosha chinhu pakufamba kwako sezvo donzvo richiri rekuuya kuzoshanda nenguva. Nekuti bhasikoro remagetsi riri kuzokurumidza kupfuura rakajairika bhasikoro. Kana mota ikaiswa paguta bhasikoro remagetsi, inogona kubatsira vatyairi kumhanyisa kumhanya kwe25-kusvika-30 km paawa. Semuenzaniso, kana kuenda makiromita masere zuva rega rega, avhareji yekumhanyisa yebhasikoro yakajairwa ingangoita 8 km paawa, zvinotora maminetsi makumi maviri nemashanu kukwira; asi bhasikoro remagetsi rinoshandisa makiromita makumi maviri nemashanu paawa pamwe nerubatsiro kana chitambi kana simba riri kudiwa, ingori maminetsi gumi nemashanu pabhasikoro remagetsi. Nekuti mabhasikoro emagetsi ari nyore kukwira. A pedal assist system zvine mutsindo inowedzera simba pasitiroko imwe neimwe, kuti ugone kuchovha kupfuura zvaunogona pabhasikoro rakajairwa rakaenzana neiro revanhu.
Kutasva bhasikoro remagetsi kuenda kubasa kunogona kudhura zvakanyanya pane kutyaira kana kutora zvifambiso zveruzhinji. Semuenzaniso, kuderera kukuru kwekutyaira mota kuenda mumadhorobha mazhinji ndechekuti iwe unogona kunge uchibhadhara mari yakawanda kungopaka mota yako. Asi kupaka bhasikoro mahara. Tevere, mutengo wemafuta zvakare dambudziko. Pasina chero kuverenga, gasi dhora rinodya rinofanirwa kukurumidza kupfuura dhora remagetsi. Zvingadai zvakadhura zvakadii pakati pemotokari neebike? Zvichida mutengo wemotokari unopfuura kagumi pane bhasikoro remagetsi pamwedzi.
Hutano Huri nani
Kutasva bhasikoro remagetsi kuenda kubasa kana chikoro kunoita kuti urambe wakashanda uye kunogona kunge uine hutano hwakakosha kusanganisira kuchengetedza chirwere chemwoyo, kenza. Chaizvoizvo, mabhasikoro emagetsi ari nyore (asinganeti) kukwira kupfuura bhasikoro rechinyakare, ivo vachiri kukurudzira kurovedza muviri, kunyanya kana vachienzaniswa nekutyaira kuenda kubasa kana kukwira bhazi. Chii zvakare, kuwedzerwa kwerubatsiro rwepedhi kunogona kuita kuti mutyairi ave zvakanyanya mukana wekuti bhasikoro rishande pane kutyaira mota. Saka bhasiketi yemagetsi bhasiketi yakanakira ivo vakati havana nguva yekurovedza muviri kana kuti havana kukwana kuita muviri.
Kana iwe uchichovha bhasikoro muzhizha apo avhareji tembiricha iri 33 degrees Celsius, iwe uchadikitira. Saka poindi iyi - iro bhasikoro remagetsi rekufambisa rinopa kukweva-kusingasunungurwe pasi peye yakachena magetsi nzira. Kunyanya, bhasikoro mutyairi anogara achifanirwa kugadzirira imwe mbatya kutsiva kuti dziite sedzakanaka, dzakachena, uye nehunyanzvi pabasa, uye bhasikoro rakajairika rakaoma kuzadzisa zvido zvavo. Uye bhasikoro remagetsi rinoita maviri-mavhiri achienda mukana wakanyanya kushanda kune vanhu vazhinji, uchirega vatyairi vanakirwe nezvakanaka zvese zvekuenda nebhasikoro uku vachibvisa zvakawanda zvacho zvinokanganisa.
Kana iwe uchida kuziva zvimwe zvinhu nezve emagetsi commuter bhasikoro, iwe unogona kutarisa zvakapfuura zvinyorwa kana kushanyira yedu Yepamutemo Webhusaiti, zvakare inogona kusiya meseji yako pazasi.
Tags:kuenda kumagetsi bhasikoro motokari yemagetsi
Prev: Akakurumbira 3 E Mabhasikoro Ari Kutengeswa - Sangana Nekuda Kwako
Next: Ndeipi Akanaka Magetsi Mabhasiketi Under $ 1000
Kuenzanisa: Electric commuter bike VS Pikipiki
Magetsi bhasikoro yemagetsi VS scooter: inonyanya kukodzera kuenda